Manchester United, Liverpool, Man City Iyo Chelsea Oo Heshiis Ku Gaadhay Ficil Ay Caawa Samaynayaan - Laacib
Manchester United, Liverpool, Man City Iyo Chelsea Oo Heshiis Ku Gaadhay Ficil Ay Caawa Samaynayaan
Kooxaha waaweyn ee horyaalka waddanka Ingiriiska ayaa ku midoobay hal tallaabo ah oo ay caawa qaadayaan oo ku kulminaysa diyaarad kaliya dusheed xilli ay isku diyaarinayaan kulamada horyaalka Premier League ee toddobaadkan oo ay ciyaaro adag dhacayaan.
Liverpool, Manchester City, Manchester United iyo Chelsea ayaa miiska wada fadhiistay, waxaanay qaateen tallaabo ay ku yaraynayaan kharashaadkooda, isla markaana ka caawinaysa inay soo ceshadaan ciyaaryahannadooda ka maqan ka hor kulamada toddobaadkan.
Subaxnimada hore ee berri ee waqtiga Geeska Afrika ayay kooxahani diyaarad khaas ah wada kiraysan doonaan, taas oo Latin America kasoo qaadi doonta ciyaaryahnnadooda ku sugan halkaas ee kaga qayb-gelaya kulamada isreeb-reebka Koobka Adduunka.
Afartan kooxood ayaa waxay ku heshiiyeen inay ku midoobaan kharash lix god ah oo ay ku bixinayaan duulimaad khaas ah oo berri soo gaadhi doona UK oo ciyaartoydoodan soo wada qaadi oona.
Brazil ayaa la ciyaari doonta Uruguay 3:30am caawa, waxaanay dhamaan doontaa marka laga soo baxo Salaadda subax.
Sagaal ciyaartoy ayaa markaas usoo duuli doona UK, waxaana ka mid ah Edinson Cavani iyo Fred oo Manchester United ah, Ederson iyo Gabriel Jesus oo Man City ah, Alisson iyo Fabinho oo Liverpool u ciyaara iyo Thiago Silva oo Chelsea, kuwaas oo ay whelinayaan Raphinha oo Leeds United u ciyaara iyo Douglas Luiz oo Aston Villa ka tirsan.
Kooxaha ay ciyaaryahannadani ka maqan yihiin ayaa ka wada-hadlay suurtogalnimada in ciyaaryahannadan ay kusoo ururiyaan laba duulimaad oo kharashkana ay u midoobayaan.
Tottenham ayaa iyadu iskeed u istaagtay oo diyaarad khaas ah u dirtay Giovani Lo Celso, Cristian Romero, Davinson Sanchez iyo Emerson Royal si ay ugu ciyaari karaan kulanka Newcastle United ee Axadda.
Dhamaan ciyaartoyda ayaa lagu qasbayaa inay xidhaan maaskaro oo ay afka dabooshaan, isla markaana kala fogaadaan.